डिप्रेसनको महसुस हुन्छ ? नगर्नुहोस् यी पाँच काम - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
२०७९ जेठ ५, बिहीबार
#डा. रविना प्राधानांग
#डा. रवीन्द्र प्रधानांग
#परोपकार प्रसुति गृह
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ डिप्रेसनको महसुस हुन्छ ? नगर्नुहोस् यी पाँच काम
डिप्रेसनको महसुस हुन्छ ? नगर्नुहोस् यी पाँच काम
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७९ वैशाख २९ गते, १३:०७ मा प्रकाशित
डिप्रेसन र तनाव आज एक गम्भीर रोग बनेको छ। डिप्रेसनको समस्याले मानिसको जीवनमा नराम्ररी असर गरिरहेको छ । डिप्रेसनका कारण मानिसलाई धेरै रोग लाग्न थाल्छ । तनाव वा डिप्रेसनको अवस्थामा व्यक्तिले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। उल्टो डिप्रेसन हुँदा मानिसहरु केहि यस्ता गल्तीहरु गर्छन, जुन गर्नु हुदैन ।
यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्छ र डिप्रेसनको अवस्था झन् हानिकारक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि तपाई डिप्रेसन महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो समस्यालाई कम गर्न र डिप्रेसनको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन केही कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आफूलाई एक्लो नबनाउनुहोस् र निराश महसुस गर्दा पाँचवटा काम गर्न नबिर्सनुहोस्। अवसाद वा तनाव हुँदा के नगर्ने भन्ने बारे जान्नुहोस्।
धेरै पटक डिप्रेसनका कारण मानिसहरु धेरै खान थाल्छन् । तनावमा भोक नलागे तापनि तिनीहरू धेरै खान्छन्। यसो गर्दा शरीरमा क्षति पुग्छ । तपाई शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै रोगबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, अनिद्राको समस्या, अपचको समस्या वा पेटमा ग्यासको समस्या हुन सक्छ। डिप्रेसन, जुन तपाईको एक प्रकारको मानसिक अवस्था हो, यसले शारीरिक समस्या पनि बढाउँछ। त्यसैले अत्याधिक खानबाट जोगिनुस् ।
रक्सीको सेवनबाट बच्ने
डिप्रेसनबाट ग्रसित मानिसले औषधि सेवन गर्न थालेको देखिन्छ । उसले धुम्रपान वा धेरै रक्सी सेवन गर्न थाल्छ। डिप्रेसन वा तनावको अवस्थामा रक्सीको सेवनबाट बच्नुपर्छ।
तनाव वा डिप्रेसनको अवस्थामा, पीडित एक्लो र उदास रहन्छ। यस्तो लक्षणलाई बेवास्ता नगरी आफैलाई एक्लो नबनाउनुहोस्। खुला हावामा बाहिर जानुहोस्। शुद्ध वातावरण महसुस गर्नुहोस्। कोठामा बन्द गर्नुको सट्टा परिवार वा साथीहरूसँग समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। मानिसहरूसँग भेट्नुहोस् र मनका भावनाहरूलाई दबाउनुहुन्न, तर खुलेर कुरा गर्नुहोस्।
डिप्रेसनमा परेका मानिसहरु अरुसँग घुलमिल नभई मोबाइल, ल्यापटप वा भिडियो गेममा समय बिताउँछन् । यसले तनाव बढाउँछ। मानिसहरु डिप्रेसनको अवस्थामा यस्ता गीत वा संगीत सुन्छन्, जसले तनाव कम हुनुको साटो बढ्छ । तपाईंको मूड यो भन्दा खराब हुन सक्छ। त्यसैले यी चीजहरूबाट टाढा रहनुहोस् र मानिसहरूसँग समय बिताउनुहोस्।
बढी समय सुत्नमा नबिताउनुहोस्
डिप्रेसनबाट पीडित व्यक्तिहरू प्रायः ओछ्यानमा सुत्छन्। उनी खाली हुनेबित्तिकै सुत्न मन पराउँछन् । तर, यसले उनीहरूलाई अनिद्राको समस्या पनि निम्त्याउँछ। त्यसैले सुत्नुको सट्टा घुम्न जानुहोस्। कसरत, योग वा नृत्य गर्नुहोस्। आफूलाई व्यस्त राख्नुहोस् सामाजिक सञ्जाल वा भ्रामक चीजहरूबाट टाढा रहनुहोस्।
क्याटेगोरी : जनस्वास्थ्य
हाई कोलेस्ट्रोलको असर यी अंगमा, विशेषज्ञले सुझाए औषधी विना नियन्त्रण…
६० प्रतिशत महिलामा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने सम्भावना, कसरी बच्ने…
हड्डी कमजोर बनाउने यी ५ खराब बानी
मधुमेहको नयाँ औषधि, के अब इन्सुलिनबाट पनि बिरामीले राहत पाउँछन्…
के तपाईको आँखा स्वस्थ छ ?
१ विश्व हेमोफिलिया महासंघको बोर्ड सदस्यमा डा विशेष पौडेल नियुक्त
२ अर्बपति बिल गेट्सलाई कोभिड संक्रमण
३ चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षाको आवेदन मंसिर ५ गतेबाट खुल्ने [सूचना सहित्]
४ आर्या न्यूरोमा पाँच दिनको नवजात शिशुको सफलतापूर्वक जटिल शल्यक्रिया
५ चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ सेरेब्रल एन्युरिज्मबाट पीडित, कस्तो हो यो रोग ?
६ चीनमा पुनः लकडाउन घोषणा
७ डिप्रेसनको महसुस हुन्छ ? नगर्नुहोस् यी पाँच काम
भाइरस पिडितको लागि ६ दिनभित्र १ हजार शैया अट्ने अस्पताल बनाउँदै चीन
अस्पतालबाट भागेका भनिएका व्यक्तिमा 'काेरोना फाेविया'
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार, नरम आहार दिन सुरु
परम्परागत खानामार्फत जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला सुरु
ज्वरोमात्रै नापेर भित्र्याइदैंछ गौरीफन्टा नाकाबाट ५ सय बढी नेपाली
कोशीमा निःशुल्क हाइड्रोसिलको उपचार, १७८ बिरामी निको भए
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८० पुग्यो, विश्व त्रसित
शान्तदेखि भीडभाड हुने स्थानमा पनि गर्न सकिन्छ ध्यान, यस्ता छन् फाइदा